Iyo iPhone 7 Plus inogona kuve ne3GB ye RAM | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 Plus inogona kuve ne3GB ye RAM
Maawa mashoma apfuura takaburitsa iyo inogona kuve iyo "inodonha", inogara iri mumakotesheni, yakakosha pane iyo iPhone 7 yakaitika kusvika nhasi. Maari, OnLeaks y uswitch yakaburitsa mamwe masikirwo eiyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus imomo takaona zvinhu zvinoverengeka zvinonakidza, senge sensor nyowani kumberi, makamera mahombe, mune iyo Plus modhi yaizove mbiri, uye Smart Connector iyo yaizongove iripo pane iyo iPhone 7 Plus.
Ming-Chi Kuo, muongorori ane mukurumbira muApple world, aida kujoina bato uye akaburitsa ongororo nyowani inotaura nezve RAM ndangariro ichasanganisira chimwe chezvigadzirwa izvo, kana pasina zvinoshamisira, zvichapihwa munaGunyana. . Muongorori weKGI anotenda kuti Apple ichasanganisira 3GB ye RAM pane iyo iPhone 7 Plus uye chikonzero chingave chekubhadhara izvo zvinowedzera kudiwa pane zvekugadzirisa mifananidzo zviwanikwa izvo kamera yepamusoro iyo inotevera 5.5-inch iPhone inotarisirwa kuve nayo.
iPhone 7 Plus: mbiri kamera, yakawanda RAM uye Smart Connector
Iyo poindi ndeyekuti iyo muongorori akadzoka uye anoramba zvaakataura mumushumo wakapihwa mwedzi yapfuura maakataura kuti Apple ichavhura matatu mamodheru e iPhone gore rino, nemvumo kubva ku iPhone SE: iyo iPhone 7, iPhone 7 Plus uye iPhone 7 Pro, zvine zvakafanana misiyano pakati pe "zvakajairika" mamodheru uye zvimwe zvakapfuura chimiro pane iyo Pro modhi.
Kune rimwe divi, Kuo anoti iyo iPhone 7 Plus ichave nayo Optical Zoom asi, kana ndisiri kukanganisa, chero iye kana mumwe muongorori anga atovimbisa izvi mumakore apfuura uye isu hatina kuzviona. Izvo zvaasingatsunge kutaura nezvazvo imarii inoteera 5.5-inch iPhone inodhura. Kana ndichifanira kuita semuongorori, kune rimwe divi ndinofunga kuti pachave newowedzero wemutengo gore rino asi, kune rimwe divi, ndinofunga nezve 16GB ne64GB zano ratiri "kukokwa" kutenga rakanyanya kudhura modhi uye ndinoonga mukana wekuti ivo vachengetedze mutengo, chimwe chinhu chingaitise isu titenge mamwe iPhone 7 Plus uye Apple yaizoita mari yakawanda, chimwe chinhu chakanaka icho varimi vangataura nezvacho.
Chero zvazvingava, zvese ruzivo rwaKoo uye kudonha kwemasikati ano zvicharamba zviri tsamba yakafa kana zvisina kusimbiswa munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 Plus inogona kuve ne3GB ye RAM
NDISINA KUVERENGA NYAYA, chete nemusoro wenyaya ndine zvakakwana kusimbisa kuti izvo hazvizoonekwa nemaziso angu gore rino.
Ndiri guruuuuuuu, muchaona.
Dr. Panda's Cars, yemahara kwenguva yakati rebei
Tevedza ese egore reEurovision nekuda kweayo app yeApp